ENTSHA! Intle 2 Br Bear Villa Kufuphi neNdlala Rock - I-Airbnb
ENTSHA! Intle 2 Br Bear Villa Kufuphi neNdlala Rock
Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguVilla
Uluhlu olutsha!!! 2BR Bear Villa ngapha nangapha Starved Rock State Park
Le rustic ibali igumbi lokuhlambela Vacation Villa ibekwe Grand Bear Resort e Utica, ecaleni Starved Rock State Park kunye zembali Starved Rock Area. I-Villa ijikelezwe yimbonakalo entle eyenziwe ngamaplanga kunye nokwakheka komhlaba okuluhlaza. Ngaphakathi, iVilla ine-1800 yonyawo lwesikwere kwaye ihonjiswe ngefenitshala yelogi yokwenyani. I-Villa ineendawo ezimbini zokubasa igesi, ikhitshi eligcweleyo, indawo yokuhlamba impahla, indawo yokuhlambela emanzi, ibhafu ye-whirlpool, i-cable TV kunye ne-intanethi engenazingcingo. Eli lisango lokuphumla leentsapho okanye iqela labahlobo ngaphaya kweChicago.
Umgangatho ophambili ubandakanya ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo, igumbi lokuhlambela eligcweleyo w / ishawari, indawo yokuhlamba impahla (indawo yokomisa kunye newasha), kunye nendawo yokuhlala enendawo yomlilo yegesi kunye neTV/DVD. Isofa/futon kwindawo yokuhlala inendawo yokulala yabantu aba-2.
Kukho amagumbi amabini okulala phezulu. Igumbi lokulala eliPhambili linebhedi yenkosi kunye nesofa yokulala yomntu omnye, i-whirlpool tub kunye nendawo yomlilo yegesi, iTV kunye nesidlali seDVD. Igumbi liqhagamshelwe kwigumbi lokuhlambela eligcweleyo w/ishawari. Elinye igumbi lokulala lineebhedi ezimbini zookumkanikazi kunye neTV/DVD. Omabini amagumbi okulala aneebhalkhoni ezijonge indalo entle.
*Ukufikelela kwiindawo ekuchithelwa kuzo iiholide kufuneka kujongwe ngqo kwiGrand Bear. Kukho iipaki zamanzi kunye neendawo zokuzonwabisa kwindawo, igalufa encinci kunye nebala lokudlala. Nceda, jonga iwebhusayithi yeGrizzly Jack's Grand Bear ngeenkcukacha kunye namaxabiso.
Ngelixa sisamkela iintsapho, kwiindibano zabantu abadala kuphela zonke iindwendwe kufuneka zibe neminyaka engama-21 ubudala (akukho prom, amaqela ekholeji, njl.).
Imizuzu esuka kwi-Starved Rock State Park kunye ne-Illinois Ricer.
- Ukungcamla iwayini
- Ukuhamba ngephenyane
-Ipaki yamanzi kunye neArcade
- IiDrives zeScenic
-Imizuzu esuka kwiidolophu zaseOtawa nasePeru